क्याम्पराइज्ड भ्यानहरुको क्रान्ति - THE INDIAN FACE
क्याम्पराइज्ड भ्यानहरुको क्रान्ति
त्यहाँ धेरै साहसी छन् जो एक भाडामा छनौट गरेका छन् क्याम्पराइज्ड भ्यान यो गर्मी र यस प्रकार गन्तव्यहरु कि यो entails, को सट्टा मात्र एक को महान विविधता छान्नुहोस्। कहीं पनी उठ्ने कल्पना गर्नुहोस्, यो समुद्र होस् वा पहाडहरु, सबभन्दा पहिले चराहरु को आवाज संगै र एक घाम जुन डरलाग्दो भई तपाइँलाई सुप्रभात भन्न थाल्छ। बाहिर जानुहोस् र सुन्दर परिदृश्य कि तपाइँ वरपर, र मा राखी प्रशंसा गर्नुहोस् हाम्रो चश्मा आराम संग बिहान को प्रकाश को लागी तपाइँको आँखा लाई अनुकूलन गर्न को लागी। हावा र शान्ति महसुस गर्नुहोस्, दुबै एक शहर को शोर को लागी अनभिज्ञ छ कि कहिलेकाहिँ थोरै डुब्छ। त्यो हो, यात्रा को अनुभव र जाने मा मार्ग को निर्णय ... के तपाइँ कहिल्यै यो मुक्त भएको छ? आखिर, यो खानाबदोश जीवनशैली त्यो भाग्ने बाटो, एक वैकल्पिक, एकै समयमा विच्छेदन र जडान गर्न को लागी एक अवसर हुन चाहन्छ। र हामी जान्दछौं कि सबैजना उचित संग बाँच्न को लागी सबै कुरा छोड्न को लागी इच्छुक हुनेछन् र केहि संग बाँधिएको छैन (हामी पहिलो, हामी कार्यालयमा आउन जारी राख्नु पर्छ), तर यसको मतलब यो होइन कि हामी यो छनौट गर्दैनौं। छुट्टी छुट्टै बिताउन। र हामी जस्तै, अरु धेरै! यो सबै को लागी, मा The Indian Face हामी यो नयाँ प्रवृत्ति को लागी धेरै ध्यान दिईएको छ र हामी तपाइँलाई हामीले पत्ता लगाएका सबै कुरा बताउन चाहन्छौं। कसलाई थाहा छ ... सायद तपाइँ अर्कोमा जानुहुन्छ #भ्यानलाइफ!
यो प्रवृत्ति कसरी सुरु भयो?
महामारीको प्रतिबन्ध पछि, यो सोच्न अपरिहार्य छ कि समाज आफ्नो गोपनीयता को लागी धेरै ईर्ष्यालु भएको छ जब यो यात्रा को लागी आउँछ, एकै समयमा कि आफ्नो आराम क्षेत्र छोड्न र ती क्षेत्रहरु को अन्वेषण गर्ने इच्छा बढेको छ, विशेष गरी स्थानीय। , जुन पृष्ठभूमि मा हुनुहुन्थ्यो। स As्कलन गरे अनुसार देश अटोमोबाइल क्षेत्र को अनुमान बाट, यस गर्मी मा केहि ५५,००० राष्ट्रीय र १५०,००० विदेशी मोटरहोम स्पेनिश सडकहरु भरेका छन्। तर यो #VanLife को बारेमा के हो जसले यति धेरै मानिसहरुलाई आकर्षित गरेको छ?
सामाजिक मिडिया मा आन्दोलन को निर्माता थियो फोस्टर हन्टिंग्टन (- पालनपोषण) २०११ मा, जो राल्फ लॉरेन मा एक डिजाइनर को रूप मा आफ्नो जीवन त्याग्न को लागी अस्सी को दशक बाट एक वोक्सवैगन Syncro मा सार्न छनौट गर्नुभयो। सर्फिंग को एक महान प्रेमी भएकोले, हन्टिंग्टन को वाक्यांश बोकेर क्यालिफोर्निया को तट यात्रा घर हो जहाँ तपाइँ यसलाई पार्क गर्नुहुन्छ ("तपाइँको घर जहाँ तपाइँ पार्क गर्नुहुन्छ")। सत्य यो हो कि, यद्यपि सबैजना सबै कुरा छोड्न र खानाबदोश जीवन बिताउन चाहँदैनन्, त्यहाँ धेरै छन् जो यसलाई बिच्छेदन र सडक र प्रकृति को पूर्ण स्वतन्त्रता को लागी विशेष गरी छुट्टी को अवधि मा महसुस गर्न को लागी उत्तम विकल्प को रूप मा देख्छन्। यो सामाजिक घटना निस्सन्देह रहन को लागी आएको छ। र तपाइँ, के तपाइँ हिम्मत गर्नुहुन्छ?
किन एक क्याम्पर्ड भ्यान मा यात्रा को अनुभव छनौट?
एक शिविर संग यात्रा गर्नु अघि र पछि हुन सक्छ। अन्य शब्दहरुमा, किन एक मात्र गन्तव्य छनौट जब तपाइँ एकै यात्रा मा धेरै धेरै देख्न सक्नुहुन्छ? यो मन र जीवन को परिवर्तन को बारे मा छ। हाम्रा प्रत्येक कार्य को पर्यावरणीय प्रभाव को बारे मा सजग हुनु र धेरै पक्षहरु मा, आत्मनिर्भर हुनु। यस्तो यात्रा मा केहि पनि बर्बाद छैन, समय पनि छैन। हरेक दिन नयाँ चिन्ताहरु जन्मेका छन्, नयाँ चुनौतिहरु, नयाँ हिचकी टाढा लैजान सक्षम नयाँ विचारहरु। तर यदि तपाइँ अझै पनी थाहा छैन वास्तव मा के कारणहरु लाई नेतृत्व गर्न को लागी धेरै जोडीहरु र साथीहरुको समूह यो छनौट गर्न को लागी हो क्याम्पर अनुभव छुट्टिहरु बिताउन को लागी, यहाँ हामी तपाइँलाई सूचीबद्ध गर्दछौं पक्ष मा केहि बिन्दुहरु त्यो पक्कै तपाइँ निर्णय गर्न मद्दत गर्नेछ:
यो तपाइँ धेरै अद्भुत र लुकेका ठाउँहरु जान्न अनुमति दिन्छ।
यो तपाइँ जाने मा तपाइँको मार्ग योजना को लागी स्वतन्त्रता दिन्छ।
तपाइँ के मात्र र आवश्यक छ संग बाँच्न सिक्न।
तपाइँ आवास र यात्रा मा बचत गर्नुहोस्।
तपाइँ पहिले जस्तो कहिल्यै कम्पनीको आनन्द लिनुहुन्छ।
सर्वश्रेष्ठ क्याम्पर्ड भ्यान के हो?
एक "क्याम्पर" अझै पनी एक भ्यान र एक मोटरहोम को बीच एक संकर हो, तर यो सर्तहरु को पहिलो को लागी अधिक प्रतिक्रिया गर्दछ। जब यो ड्राइभि to्ग को लागी आउँछ, ह्यान्डलिंग धेरै यसको सानो आकार को कारण एक कार को समान छ, र मूल्यहरु लगभग 37 हजार यूरो छन्। ती सवारी साधनहरु हुन् जो आधारभूत संग आफ्नो ब्यबहार को लागी अनुकूलित गरीएको छ र कि, motorhomes को विपरीत, शरीर मा माउन्ट गरिएका संरचनाहरु छैनन् तर पछि हुन को लागी अनुकूलित गरीएको छ। "घरेलु सवारी साधन".
भित्र भित्र क्याम्पर भ्यान हामी तीन आकार पाउन सक्छौं अनुभव को आधार मा छनौट गर्न को लागी हामी रमाईलो गर्न चाहन्छौं। को मिनी क्याम्पर अधिक सामान्य जस्तै मोडेल हुन सक्छ:
अर्कोतर्फ हामीसँग छ मध्यम, जसको बीचमा हामी केहि मोडेलहरु लाई हाइलाइट गर्न सक्छौं जस्तै:
म यो हुन सक्छ कि यस समूह भित्र तपाइँ s० को दशक को अमेरिकी फिल्महरु को विशिष्ट वोक्सवैगन पहिचान गर्न सक्नुहुन्छ। बाहिरी बैंक श्रृंखला मा, नवीनतम Netflix घटनाहरु मध्ये एक, लगभग सम्पूर्ण भूखंड एक पुरानो वोक्सवैगन Kombi Westfalia को पा wheel्ग्रा पछाडि ठाउँ लिन्छ।
र अन्तमा हामी ती मोडेलहरु को पाउन सक्छौं ठूलो आकार, जस्तै:
भ्यान को यी प्रकार को तपाइँ यात्रा गर्न को लागी अनुमति दिनेछ। पक्कै धेरै ठाउँ संग। उनीहरु "पा whe्ग्रा मा घर" को एक ठूलो भावना दिन्छन्, किनकि, सबै पछि, उनीहरु पूर्ण रूपले सुसज्जित छन्। उनीहरु परिवारहरु वा साथीहरु को समूह को लागी डिजाइन गरीएको हो, र एक समूह मा यो जस्तै केहि बाँच्न को अनुभव धेरै रमाईलो र समृद्धि भन्दा तपाइँ कल्पना गर्नुहुनेछ।
भ्यान भाडामा: फेदर भ्यान
सायद एक campervan किन्ने पहिलो विकल्प हो कि दिमागमा आउँदैन जब तपाइँ सोच्नुहुन्छ #VanLife मा सामेल हुनुहोस्। मेरो मतलब, साहसी तर धेरै छैन, हैन? शान्त! समाधान धेरै अन्य चीजहरु को लागी उस्तै हो: भाडा। वास्तव मा, त्यहाँ धेरै कम्पनीहरु छन् कि यो विशिष्ट क्षेत्र मा सामेल भएका छन्, जसको इन्स्टाग्राम प्रोफाइलहरु लाई एक साथ ल्याउन को लागी तपाइँ र म जस्तै मानिसहरु जो तट वा पहाडहरुमा एक campervan मा केहि दिन बिताउने निर्णय गरेका छन्। यस्तै एउटा कम्पनी हो फेदर भ्यान (hethefeathervan), र हामी यसलाई अधिक मन पराउन सकेनौं! यो कम्पनी तपाइँ भाडामा अनुमति दिन्छ म्याड्रिड र बार्सिलोना मा भ्यान को विभिन्न मोडेलहरु जसलाई उनीहरुले बहामास, बाली, ओहाना, एरिजोना जस्ता नाम दिएका छन् ... ती सबै अविश्वसनीय देखिन्छन्! हामी आत्मालाई माया गर्छौं कि उनीहरुको व्यापार मोडेल सास फेर्छ किनकि यो अद्वितीय अनुभव साझा गर्न को लागी प्रतिबद्ध छ र उनीहरु लाई घरपालुवा जनावर लाई पनि अनुमति छ। उनीहरुले सबै कुरा सोचेका छन्! यो द्वारा बनाईएको थियो प्रभाव अल्बा पॉल फेरर (balbapaulfe) र उनको साथी लुसिया (lmedrano_), र यो पनि अन्य व्यक्तित्वहरु जस्तै मार्टा Riumbao को लागी एकदम सही पलायन योजना भएको छ (umbriumbaumartaलुक लोरेन)@lucloren) वा मगली दलिक्स (magalidalix)। हाम्रो टोली मा हामी पहिले नै हामी सप्ताहन्त मा जाने को लागी हेर्न को लागी हेरिरहेका छौं, म तपाइँलाई अधिक बताउने छैन। सब भन्दा राम्रो कुरा यो हो कि उनीहरुको वेबसाइट तपाइँ लाई हेर्न को लागी अनुमति दिन्छ तपाइँ चाहानु भएको मितिहरु को लागी प्रत्येक मोडेल को उपलब्धता, र यो ठ्याक्कै प्रत्येक भ्यान को माप को रूप मा साथै यो सुविधाहरु को निर्दिष्ट गर्दछ। यो तपाइँ मा निर्भर छ तपाइँ मार्ग गर्न को लागी छनौट गर्न को लागी हो, र त्यहाँ बाट, यसलाई पूर्ण रूप मा रमाउनुहोस्। हाम्रो मुख यो महान योजना संग पानी छ।
कहाँ एक क्याम्पर संग यात्रा को लागी स्पेन को सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रहरु लाई खोज्न को लागी?
एक संग यात्रा क्याम्पराइज्ड भ्यान यो प्रकृति प्रेमीहरु को लागी उपयुक्त छ, यो समुद्र वा पहाड हो। लेख को शुरुवात मा हामीले सामाजिक परिवर्तन को प्रकाश पारेका छौं कि COVID ले यो संग ल्याएको छ, र हाम्रो आफ्नै देश को खोज बिदाहरु बिताउने र यस प्रकार स्थानीय पर्यटन र स्पेनिश अर्थव्यवस्था को सुदृढीकरण को लागी सबै भन्दा राम्रो विकल्प बनेको छ। बाहिर को अद्भुत परिदृश्य र मौसम छ कि हामी यहाँ छ संग बाहिर जान चाहन्छ?
विभिन्न फोरम र क्याम्पर प्रेमीहरु को समुदायहरु द्वारा भनिएको छ, यस प्रकार को एक भ्यान संग यात्रा गर्न को लागी सबै भन्दा राम्रो पहाडी क्षेत्रहरु को क्षेत्र हो पाइरेनीज, Picos de Europa y सिएरा नेवाडा। तर यदि, यसको विपरित, तपाइँका साथीहरु र तपाइँ केहि अधिक तटीय को लागी खोज्दै हुनुहुन्छ, उनीहरु जस्तै ठाउँहरु को सिफारिश R Bas Baixas, Tarifa y कोस्टा ब्लान्का.
र यदि यी सबै पछि तपाइँ अझै पनी #VanLife मा सामेल हुने निर्णय गर्नुभएको छैन, कल्पना गर्नुहोस् तपाइँको देश कती राम्रो देखिनेछ हाम्रो टोपी मध्ये एक.
प्रश्न र उत्तरहरु
एक क्याम्पर भ्यान कसरी छनौट गर्ने?
जब एक भ्यान मोडेल छनौट यो सुपर खाता मा लिन को लागी महत्वपूर्ण छ मान्छे को संख्या त्यो यात्रा हुनेछ। जति धेरै भनिएको छ कि "जहाँ दुई फिट, तीन फिट", जब यस प्रकार को यात्रा को लागी जसमा ठाउँ सीमित छ, सान्त्वना यो एक प्लस बिन्दु हो; यो तपाइँ धेरै धेरै अनुभव को आनन्द बनाउन हुनेछ। अर्कोतर्फ, मूल्य खाता मा लिन को लागी अर्को कारक हो, त्यसैले हामी सिफारिश गर्दछौं कि तपाइँ आफैंलाई जस्तै प्रश्न सोध्नुहोस्: के संग आवृत्ति के तपाइँ क्याम्पर द्वारा यात्रा गर्नुहुन्छ? कति वटा किलोमिटर के तपाइँ एक बर्ष गर्न सक्नुहुन्छ? वास्तविकता यो हो कि, यद्यपि यो एक खर्च cushioning को बारे मा छ, यो एक लगानी हो कि साँच्चै यसको लायक छ। Spoiler: यस प्रकार को एक यात्रा पछि ... तपाइँ निश्चित गर्न को लागी दोहोर्याउन चाहानुहुन्छ।
क्याम्परको मूल्य कति छ?
धेरै अन्य क्षेत्रहरु को रूप मा, तपाइँ मूल्यहरु को एक विस्तृत विविधता पाउन सक्नुहुन्छ र सबै कुरा ब्रान्ड, उत्पादन र विशिष्टता मा निर्भर गर्दछ। एक क्याम्पर भ्यान को मामला मा, मूल्यहरु वरपर छन् २ and र e० यूरो। जे होस्, जसरी हामीले तपाइँलाई अघिल्लो सेक्सन मध्ये एक मा भनेका छौं, त्यहाँ सधैं हुन्छ भाडामा लिने विकल्प। यस मामला मा मूल्यहरु धेरै दिनहरु को संख्या मा तपाइँ भ्यान चाहानुहुन्छ मा निर्भर गर्दछ, तर निस्सन्देह त्यहाँ यी वाहनहरु को धेरै वर्तमान प्रयोगकर्ताहरु छन् जो पहिलो भाडामा लिन को लागी पहिलो सम्पर्क को अनुभव गर्न को लागी, नत्र तपाइँलाई अनुभव मन पर्दैन। !
भ्यान कहाँ पार्क गर्ने?
यो सत्य हो कि त्यहाँ हाल धेरै संरक्षित क्षेत्रहरु छन् जहाँ कारवाँ वा भ्यान पार्क गर्न को लागी अनुमति छैन। जे होस्, एक अपेक्षाकृत अध्ययन मार्ग संग तपाइँ रात बिताउन कुनै समस्या छैन। तपाइँ ठूला शहरहरुमा सबैभन्दा ठूलो कठिनाई पाउनुहुनेछ। उदाहरण को लागी, यदि तपाइँको क्याम्पर मार्ग मा म्याड्रिड को माध्यम बाट पारित शामिल छ, त्यहाँ देबोद को मंदिर मा एक लामो दूरी को कार पार्क छ जहाँ तपाइँ १२ घण्टा को एक अधिकतम को लागी तपाइँको भ्यान छोड्न सक्नुहुन्छ। जे होस्, मार्गहरु को विशाल बहुमत संयोजन शिविर र जंगली शिविर तेसैले, जब सम्म तपाइँ एक संकेत देख्नुहुन्छ कि विशेष गरी यो निषेध गर्दछ, तपाइँ एक प्रमुख समस्या हुनेछैन।
क्याम्पर भ्यान बनाउन कति खर्च लाग्छ?
यदि एक क्याम्पर संग यात्रा पहिले नै एक साहसिक भावना संग मानिसहरु को लागी बनाईएको हो, कल्पना गर्नुहोस् जो भ्यान आफैं बनाउँछन्! यो प्रक्रिया दुई महत्वपूर्ण भागहरु मिलेर बनेको छ: एक पूरा camperización बनाउन र वाहन आफै homologate। यो camperization को लागी हामी एक ईन्जिनियर हुनु पर्छ (यो हाम्रो आफ्नै मा यो गर्ने योजना छैन) र सामान्यतया कुल मूल्य यो लगभग 6000 यूरो सम्म पुग्न सक्छ। यो निर्भर गर्दछ, सबै भन्दा माथि, मा प्रयोग सामग्री को गुणस्तर र को उपकरण को मात्रा जसको साथ तपाइँ तपाइँको नयाँ घर बनाउन चाहानुहुन्छ। यो तपाइँको घर को एक "remodel" को रूप मा सोच्नुहोस्।
भ्यान द्वारा मार्ग गर्न को लागी सबै भन्दा राम्रो समय के हो?
जस्तै हामीले तपाइँलाई यस लेखमा भन्यौं, मा The Indian Face हामीले हाम्रो देशमा गर्मी को मौसममा भ्यान को दर्ता मा यो पलटाव देखेका छौं। सायद, यो देखेर, तपाइँ मितिहरु को मामला मा एक सानो "वैकल्पिक" हुन चाहानुहुन्छ ताकि तपाइँको छिमेकी संग पाँचौ मा मेल नखाने को लागी, जो एक भ्यान मार्ग मा जाने को विचार लाई मनपर्छ। तर यो जान्न को लागी महत्वपूर्ण छ कि तपाइँको अनुभव मौसम को आधार मा धेरै फरक हुनेछ। को वसन्तउदाहरण को लागी, यो एक शानदार विकल्प हो यदि तपाइँ स्पेन वरपर यात्रा गर्न चाहानुहुन्छ।